Somalia – Page 8 – Saraar Media
Home›All War›Category: "Somalia" (Page 8)
0-2 Kulankii Golaha Wasiirrada Soomaaliya ee maanta oo uu shir-guddoominayay RW Xukuumadda Federaalka, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa waxaa looga Hadlay Qodobbo ay ka mid ahaayeen; Xaaladda Siyaasadeed ee dalka & daba-galka Hantida Qaranka. RW Sharma’arke, ayaa wuxuu warbixin la xiriirtay Xaaladda Siyaasadda ee Waddanka u soo gudbiyay golaha wasiirrada, isagoo sheegay in maamul u ...
00 Waxaana maanta ka furmay magaalada Muqdisho Bandhiga Carwada Buugaagta, kaasoo ah sanadkii labaad oo la qabtay bandhigan, iyadoo ay ka soo qeyb galeen dad kala duwan oo ka yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaana ka mid ahaa Qalinley Magac Ku leh bulshada Soomalida. Bandhigan ayaa socon doona saddex maalmood, waxaana qorayaal Soomaali iyo ajaaniib isugu ...
00 Halkan ka daawo Wariye Cali Xaraare oo qaadaa dhigaya Siyaasada Somaliya ee ku aadan Doorashooyinka soo socda. Waxa uu falan qaynayaa kooxaha ay ukla qaybsan yihiin guruubada siyaasada somaliya ee u cararaya kursiga Madaxweynaha.
00 Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa baaq ku Aaddan Doorashooyinka dhacaya Sannadkan 2016-ka u diray Qaybaha Bulshada Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka. Baaqan ayuu Madaxweynuhu ku sheegay, in Dalku uu ku jiro Marxalad kala-guur ah, loona baahan yahay Shaqaalaha laamaha kala duwan ee Dowladda inay Dar-dar-geliyaan fulinta Waajibaadkooda shaqo. “Waxaan u mahad-naqayaa dhammaan shaqaalaha Dowladda ...
+10 Arbaco, 17 Aug, 2016 (SM)-Dagaal culus oo u dhexeeya Al-shabaab iyo ciidamada Jubaland ayaa saaka gelinkii hore ka qarxay deegaanka Cabdalla Biroole oo qiyaastii 45 km dhanka galbeed kaga began magaalada Kismaayo. Dagaalkan oo ka dhashay kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland ay weerar ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab oo la sheegay ...